Ogaden News Agency (ONA) – Xalay Minnesota waxay ahayd “Habeenkii Ogadenya” oon loo kala hadhin
Xalay Minnesota waxay ahayd “Habeenkii Ogadenya” oon loo kala hadhin
Waxaa habeenkii xalay Sabtida ay taariikhdu ahayd 04/21/2012 ka dhacay magaalooyinka mataanaha (twin cities) ee gobolka Minnesota bandhig faneed taariikhi ah oo ay soo diyaariyeen uruka OYSU, Ogaden Youth Students & Union ee gobolka Minnesota, looguna magac dareen “Ogaden Night” amaba “Habeenkii Ogadenia”.
Dhacdadan taariikhiga ah wuxuu ahaa midku jiray (Action plane) ama qorsha sanadeedka OYSU. Kullankan ayaa waxaa kasoo qayb galey dadwayne aad u fara badan oo isoogu jira jaaliyada Soomaalida Ogadenia & Mida soomaali waynba.
Barnaamijkan ay dhalinyaradu soo diyarinayeen mudooyinkii oogu danbeeyay ee bishan ayaa sida caadada u ah halganka xaq udirika Ogadenia lagu bilaabay aayadaha Qur’anka. Kadib waxaa Lagu soo dhaweeyay micraphonka Gudoomiyaha Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Minnesota Sheekh- Mohamed Abdi Aar, oo furay barnaamijka. Furitaanka kadibna waxaa goobta lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha ururka OYSU ee gobolka Minnesota Farhan Ahmed oo wax kataabtay taariikhdii & aas aaskii ururka OYSU (World Wide).
Waxaa isaguna si xeel dheer uga hadlay xaalada & warbixinta guud ee Ogadenia Hogaanka Cilmi baadhista & Qorshaynta Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadenia Mudane Maxamuud Nuur isagoo ku soo dhaweeyay ooguna mahad celiyay ka qaybgalkooda Siyaasiyiin ka socotay Wadanka Maraykanka oo cawayska kasoo qayb galay bulsha waynta reer Ogadenia ee kusugnaa Gooobta.
Labada masuul oo kala aha Chris Fields oo usharaxan UScongress & Dan Doc Severson oo isna ah masuul usharaxan USsenator. Labada xildhibaan oo halkaas ogasoo jeediyay Jaaliyada Ogadenia mahad naq aad udheer kadibna u balan qaaday in Qadiyada Ogadenia ay gaadhsiin doonaan dhamaan masuuliyinta kale ee Maraykanka garabkoodana ahaan doonaan.
Dan Doc Severson aya hadalkisii ku daray “Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Minnesota waxaan noqonay Family ama Qoys waxaana markasta ku faraxsanahay anigoo arka idinkoo raadiyanaya xuquqda idinka Maqan, waxaan idinka bartay waxyaalo badan oonan horay u arkin” . Xildhibaan Chris Fields oo mudo kabadan 20 sano ahaa US marines ayaa isaguna Hadalkisi ku qeexay “Dhibaatada Qadiyada Ogadenia & xanunka shucuubtaas dulman waan dareemaynaa waana idin garab taagnahay markasta”.
Intaas kadib waxaa dadwaynaha la horkeenay dhalintii diyaarka u ahayd inay bulshada lawadagaan xogta dhabta ee kajirta Ogadenia, iyadoo barnaamijka lagu bilaabay heesta calanka qaranka Ogadenia. Kadib waxa loo guda galay barnaaimjkii loogu magac daray; “Habeenka Ogadenia”, halkaas oo ay dhalin da’yar kula wadaageen bulsha wayntii hab faneedkii ay usoo diyaariyeen. Waxayna halkaas dhalintu kamuujiyeen wacdaro iyagoo soo bandhigay Geeraaro, heeso & dhaantooyin qiiro galiyay shacab waynihii halkaas isugu yimid. Waxayna dad waynihii halkaas isoogu yimid & uruka dhalinyarada OYSU isla qaateen habeen taariikhi ah oo lagu dheehay bandhig faneed. Waxaana halkaas lagu soo gaba gabeeyay barnaamijkii Ogaden Night oo tabanayay xaqiiqda dhabta ah ee kajirta Ogadenia.